China maviri Stage Lock Mhepo Valve fekitori uye vagadziri | Judha
Matanho maviri ekuvhara mhepo vharuvhu mudziyo izere yekuisa chisimbiso michina yakagadzirwa nekambani yedu zvinoenderana nemamiriro chaiwo ekugadzira.
10. Mhepo yekuvharira system
Dhiviri-nhanho yemhepo-yekukiya vharuvhu mudziyo: ndeimwe yeanokosha maitiro ekugadzirwa kwelime shaft kiln. Iyo yakazara dota yekubvisa michina ndeyekumisa mweya uye pedza dota, ichi chishandiso ndechekuchengetedza mhepo uye nekuisa chisimbiso padota: mukuita kwekubvisa madota, nekuda kwekutenderera kwekutsemuka kwezvinhu zviviri zvinokanganisa, mweya wekutsva hauzodonhe kubva iyo yepazasi chikamu, icho chinogona kunyatso kuvandudza mhando uye kubuda kweiriimu.
chimiro chemidziyo: chishandiso chinoumbwa nechekumusoro nechepasi maviri chikamu chinokatyamadza bhokisi, bhokisi rega rega rinoshamiswa, yekumusoro rocker ruoko, chokurukisa, rekunze dombo ruoko, humburumbira, solenoid vharafu, yekumhanyisa vharuvhu yekudzora, pneumatic chikamu, girizi chikamu (tarisa pamufananidzo wakabatanidzwa).
Maparameter emidziyo: modhi JD200-JD300, madota ekudzikisa madhiragi 70 T / h-100T / h, kushanda kumanikidza 0.4 MPa-0.4MPa
Kugadzirwa 100-300 T / D, Kushanda tembiricha <100 ℃ 5000 kg- <100 ℃ 8000
Musimboti wemidziyo: maviri-maseru mavharuvhu anoshanda zvakasiyana pasi pekutonga kwemagetsi kuona kuti mweya wemoto haubude kubva kuchikamu chepasi. Iyo miviri-nhanho vharuvhu muviri unosvinudzwa kana kuvharwa nedombo ruoko pasi pechinjana mashandiro esirinda. Kana bhavhu repamusoro ravhurwa, dota rakapedzwa kubva kurudzi rwepamusoro kuenda kumutumbi wevhavha wepamusoro, mushure mekuvhiringidza kwepamusoro, vharuvhu yepasi yevharuvhu inovhurwa, uye dota rakapedzwa mumusoro wevharuvhu ndangariro rinowira pane rapera. chigadzirwa bhandi kuburikidza nemuviri wezasi wevharuvhu kupedzisa chiito chekubvisa dota.
Zvinoumba mhepo zvechizarira mavharuvhu:
chishandiso chine ina-mativi madota muchina, mune inoenderera madota kuburitsa kuita kuti choto chisimbiswe zvakanaka, hazvikanganise mweya wemoto unopfuurira mweya unopa.
b dota kubvisa maitiro haimanikidzi, kukuvadza lime block.
c yekushandisa mashandiro ekugadzirira, yakavimbika, isina kugara ichigadziriswa, yakaderera kutadza chiyero.
Pashure: Kupisa fan
Zvadaro: Fastigiate Lime Kuburitsa Muchina
Juda kiln- mazana matatu / zuva X4 Lime kilns muLuoyan ...
Karusiyamu Hydroxide Kugadzira Line Equipment, Karusiyamu oxide Uye Calcium Hydroxide, Zita Rekutengesa ReCalcium oxide, Karusiyamu Hydroxide Equipment, Kugadzira Calcium Hydroxide, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira,